Home Wararka Ciyaaraha Liverpool oo isku diyaarineysa inay xoojiso raacdada ay ugu jirto Florian Neuhaus
Liverpool ayaa lagu soo waramayaa inay qorsheyneyso inay xoojiso raacdada ay ugu jirto Florian Neuhaus iyadoo ay jiraan warar sheegaya in Manchester City ay ku soo biirtay loolanka loogu jiro ciyaaryahanka khadka dhexe ee Borussia Monchengladbach .
24 jirkaan ayaa qaab ciyaareed cajiib ah ku soo qaatay kooxdiisa Bundesliga intii lagu jiray ololihii 2020-21, isagoo ka qeyb qaatay sideed gool iyo sideed caawin 45 kulan oo uu saftay tartamada oo dhan.
Warbixin dhowaan soo baxday ayaa sheegeysa in Liverpool ay la socon doonto qaab ciyaareedka Neuhaus ee xulka Jarmalka Euro 2020 ka hor inta aysan go’aansan inay sii wadaan inay la wareegaan.
Si kastaba ha noqotee, Man City ayaa sidoo kale la sheegayaa inay xiiseyneyso ciyaaryahanka khadka dhexe, kaasoo ahaa bedel aan la isticmaalin kulankii furitaanka Koobka Qaramada Yurub ee xulkiisa ay la ciyaareen France 15kii June.
Sida laga soo xigtay Sport1 , Liverpool ayaa isku diyaarineysa inay xoojiso raacdada ay ugu jirto Neuhaus, waxaana Reds ay diyaar u tahay inay bixiso ku dhowaad 40 milyan oo ginni (34 milyan oo ginni) si ay ugu keento Anfield suuqa hadda socda.
Xiddiga Jarmalka ayaa weli seddex sano uga hartay qandaraaskiisa haatan ee Borussia-Park.
Previous articleXulka England oo Bar-baro kala kulmay Xulka Scotland Euro 2020
Next articleKieran Tierney oo qarka u saaran inuu saxiixo heshiis cusub oo shan sano ah oo Arsenal ah